Umkhenkce Womkhenkce Indalo ihlala iyeyona nto ibalulekileyo yokuphefumlela abaqulunqi. Umbono weza kwiingqondo zabayili ngokujonga esikhaleni kunye nomfanekiso weMilk Way Galaxy.Owona mbandela ubalulekileyo kolu loyilo yayikukudala indlela eyahlukileyo. Uyilo oluninzi olusevenkileni lugxile ekwenzeni olona qhwa lucacileyo kodwa kolu luyilo lwenziweyo, abaqulunqi ngabom bajolise kwiindlela ezenziwe ngamaminerali ngelixa amanzi ajika aba ngumkhenkce, kucace ngakumbi ukuba bayiliyile eliguqukayo isiphene sendalo. kwisiphumo esihle. Olu luyilo ludala ifomati yomoya ojikelezayo.
Opx2 Ukufakwa Kwe-Optic Tuesday 5 July
Vivit Collection Amacici Kunye Neringi Monday 4 July
Bridal Veil I-Chandelier Sunday 3 July
Isinamon Roll Kunye Nobusi Ukutya Isiphuzo Umkhenkce Womkhenkce I-Filter Yecuba Iluhlobo Indawo Yokuguqula Ukupaka Ibhayisekile